Chikunguru 3, 2019 Ali Ongororo
Chikunguru 1, 2019 Afra Sanjana
June 27, 2019 Ali Ongororo
Iro Ramangwana rakawedzerwa
Chii chingaitika kana mutsetse uripakati pezvakanaka uye nemuviri wakasvibiswa? Kana dai zvaisavapo zvachose? Nyika iyoyo yaizoita sei? Needu 3D Virtual Reality Magirazi, iwe unogona ikozvino kuzviona mukunyaradza kwe ...
Dai 21, 2019 Ali Ongororo
Maitiro Ekushongedza Kamuri Kuti Uve Stylish
Chimwe chezvinhu iwe chaunofanirwa kuziva nezvekushongedza chero imba pamba pako ndechekuti chakanyanya kukosha ndechekuti uve nechokwadi chekuti unoichengeta yakasununguka uye yakashongedzwa. Uye chokwadi ndechekuti zvisinei kuti ndeipi ...
Dai 18, 2019 Ali Ongororo
Zvekudya Vs. Zvekuwedzera - Kwaungawana Kwazvo Nutrients Yaunoda?
Sezvaunoziva, kuti ukwanise kuchengetedza hupenyu hune hutano, unofanirwa kuve nechikafu chine hutano. Muchokwadi, iwe unoda zvakawanda zvakasiyana zvinovaka muviri izvo zvinosanganisira mavitamini A uye C, calcium, uye magnesium. Kunyangwe chikafu chitsva chichiwanzo ...
April 18, 2019 Ali Ongororo
6 2019 Yemafashoni Maitiro Aunofanirwa Kuziva Nezve
Kana iwe uri mudiwa wemafashoni uye uchida kuve pamusoro peazvino maitiro, saka unofanirwa kuve nechokwadi chekuramba uchiverenga. Mushure mezvose, iwe wave kuda kutsvaga yepamusoro 6 2019 fashoni yemaitiro ...
3 Tekinoroji Maitiro Aunofanira Kuziva Nezve
Kana iwe uri fan yezvazvino matekinoroji, saka iwe unoda kuve uri pamusoro pezvakanakisa zviri kuitika mupasi. Ichokwadi ndechekuti tekinoroji iri kufambira mberi zuva rega rega. Mushure mezvose, kwete kudaro ...